March 2021 – हाम्रो देश
Posted on 31/03/2021 by हाम्रोदेश
काठमाडौं : पूर्व युवराज पारस शाह चढेको हेलिकप्टर आज साँझ तनहुँको व्यास नगरपालिका–१४ मास्दीघाटमा आकस्मिक अवतरण गरिएको छ । काठमाडौँबाट भरतपुरतर्फ उडेको इयर डाइनेष्टिको हेलिकप्टर मौसम खराबका कारण मास्दीघाटमा अवतरण गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज तिमिल्सिनाले मौसम खराबीका कारण हेलिकप्टर आकस्मिक अवतरण भएको जानकारी दिए । “प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा
Posted in समाचारLeaveacomment
वायु प्रदूषणका कारण शरीरमा यस्ता असर देखिन सक्छन्
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको आकाश केही दिनयता निकै प्रदूषित छ । उपत्यकामा बढेको वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् । वायु प्रदूषण बढेपछि विज्ञान प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रालयले देशभरका विद्यालय शुक्रबारसम्मका लागि बन्द गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि घरबाहिर सकेसम्म ननिस्कन र निस्कनै परेमा विशेष
समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सुरक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री थापा
काठमाडौं : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सुरक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज गृह मन्त्रालयमा आव २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न पनि सुरक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताए ।
वर्षाले छाडेपछि रेश्मा, उषा हुँदै गरिमालाई ‘सुदुर’को अफर
Posted on 31/03/2021 by hamro des
निर्देशक रमेश वुढाथोकी चलचित्र ‘सुदुर’का लागि नायिका नपाएर हैरान छन् । नायिका वर्षा सिवाकोटीले चलचित्रमा काम गर्ने पक्का गरेकी थिइन् । तर, चलचित्रको छायांकन सुरु हुन लामो समय लागेपछि वर्षाले नयाँ चलचित्रलाई समय दिनुपर्ने भन्दै ‘सुदुर’ छाडिन् । यसपछि भने रमेशलाई नायिका खोज्न नै सकस परिरहेको छ । यो चलचित्रका लागि नायकको रुपमा मुकुन भुषाल
Posted in कला / साहित्यLeaveacomment
एक अर्ब रूपियाँ पर्ने जग्गा सरकारलाई फिर्ता हुँदै
नेपालगञ्ज, चैत १८ गते । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकास्थित साविकको उढरापुर गाविस वडा नं. २ र हालको वडा नम्बर ६ खाँडसारीमा रहेको १८० बिघा जग्गालाई सरकारकै नाममा दर्ता गर्न भूमि व्यबस्था, सहकारी तथा गरीबि निवारण मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ । तत्कालीन सरकारसँग ऊखु खेती तथा चिनी मिल सञ्चालन गर्नका लागि २०४२ सालमा लिएको एक अर्ब दुई
देउवाले प्रचण्डलाई भने- अहिले नै कच्चा खेल नगरौं
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनकै निवासमा भेटे। तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि र सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि प्रचण्डले देउवालाई सत्ता साझेदारीका लागि बेला-बेलामा भेटिरहेका छन्। मंगलबार भएको बुढानिकलकण्ठमा देउवासँग झन्डै २० मिनेट भएको कुराकानीमा
शान्ता चौधरीको प्रश्न–’के सरकारको विरोध, विरोधको लागि मात्र हो ?’
काठमाडौं । नेकपा एमालेको नेतृ शान्ता चौधरीले सरकारले गरेको अति महत्वपूर्ण कामहरु देख्नै छोडेको बताएकी छिन् । उनले संसदको विशेष समयमा बोल्दै सरकारले गरेको सबै राम्रो कामलाई बिर्सिएर विरोध मात्र गरेको बताएकी हुन् । उनले सरकारले धेरै राम्रो र महत्वपूर्ण काम गरेको भएपनि यहाँ विरोधको लागि विरोध मात्र गरेको उनले बताएकी हुन् । उनले सरकारले
झाँक्रीले भनिन्- ‘हेक्का होस् ! पृथ्वी गोलो छ’
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई निलम्बनको कारबाही गरेपछि एमाले नेर्त रामकुमारी झाँक्रीले प्रतिवाद गर्नु भएको छ । सामाजिक सञ्जाल ट्वी’ट मार्फत झाँक्रीले अध्यक्ष केपी ओलीले नेता नेपाल र रावललाई गरेको कारबाही कमजोरहरूको अन्तिम अस्त्र भएको बताउनुभएको छ । ‘कमजोरहरूको अन्तिम अस्त्र हो । जोडले चिच्याउने,
‘दुई वर्षपछि फेरि बढ्दैछ आईएसको गतिविधि’
१८ चैत, काठमाडौं । आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) को गतिविधि पुनः बढ्न थालेको भन्दै विश्वका विदेशमन्त्रीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सिरियामा पराजित भएको दुई वर्षपछि आईएसले पुनः आतंकवादी आक्रमण शुरु गरेको उनीहरुले बताएका छन् । ‘इस्लामिक स्टेटविरुद्ध विश्वव्यापी संगठन’ को भर्चुअल बैठकमा विदेशमन्त्रीहरुले केही समययता अफ्रिकाका मुलुकमा भएको आक्रमणबारे पनि चिन्ता गरेका छन्
Posted in अन्तरराष्ट्रियLeaveacomment
चैत २३ भित्र विश्वासको मत नलिए ओली सरकारको हैसियतमा प्रश्न उठ्छः सांसद गुरुङ
काठमाडौं, १८ चैत । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तथा सांसद देव गुरुङले ओली सरकारले चैत २३ गते भित्र विश्वासको मत नलिए सरकारको हैसियतमा प्रश्न उठ्ने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद गुरुङले दल विभाजन भएको बताउदै चैत २३ सम्ममा सरकारले विश्वासको मत नलिए सरकारको हैसियतमा प्रश्न उठ्ने बताएका हुन् । उनले